Walutshixa Aluminium Lugs Abenzi kunye Suppliers | China walutshixa Aluminium Lugs Factory
Jera umgca co efanelekileyo., Ltd nomvelisi CLB lugs intambo zikagesi kunye nemigca ezihamba.
Jera uye wafunda iintlobo enkulu amalungu intambo ombane aphantsi, aphakathi kunye omkhulu, kunye neendibano ezahlukeneyo kunye nendlela lomsebenzi. Siphumeze ezimotweni cable jointing ifanelekileyo ngenjongo nokupheliswa kunye uqhagamshelwano zokuhambisa. Ummandla nokusetyenziswa: impahla, ulwakhiwo mveliso, ehamba, imizila kaloliwe, zombane iibhokisi yokuyeka kunye nekhabhathi, ukuvalwa intambo phantsi komhlaba.
Yokuvelisa uchebe lugs intloko intambo amandla aphezulu, umhlwa izinto aluminium ukumelana, kunye etotini nesingxobo. Imimandla torque kabini iibholiti aluminiyam kuqinisekisa uqhagamshelwano lombane siqinisekile ukuba ngobubanzi ezahlukeneyo iintambo, kunye nokungabikho nokumelana ezibalulekileyo.
Wamkelekile ukuba uqhagamshelane nathi ukuba iinkcukacha ezingakumbi, singathanda ukuba banikele kuwe uluhlu imveliso kakhulu ezizalisiweyo lugs aluminium intambo ngoomatshini.
NoMasalela intloko evulwa ndiwele CLB 150-240
NoMasalela intloko evulwa ndiwele CLB 70-120
NoMasalela intloko evulwa ndiwele CLBV 150-240
NoMasalela intloko evulwa ndiwele CLB 4-35